China Tyvek Akwụkwọ Bag Inogide washable mkpọchi uwe mmechi Etemeete Bag Natural ịchọ mma Bag factory na suppliers | Changlin
Tyvek Akwụkwọ akpa inogide keosarị mkpọchi mmechi Etemeete Bag Natural ịchọ mma Bag
Ihe onwunwe: Tyvek Arọ: 66g
Mmechi: Mkpọchi uwe
Ngwa: ịchọ mma, aka ọrụ, mposi, ezinụlọ
Advantage: Onwu eco-enyi na enyi
Ihe a na-akpọkarị n'ahịa dị ka "akwụkwọ Dupont" bụ ụdị nnukwu polyethylene nke akpọrọ Tyvek, nke a na-akpọ n'asụsụ Chinese Twiken.
Ekepụtara Tyvek na 1950s wee malite mmepụta azụmahịa na 1960. Tyvek bụ site na iji teknụzụ ọkụ, site na polymer mgbe ọ gbazere ọkụ n'ime filament na-aga n'ihu ma kpoo ha n'ime polyethylene dị elu, teknụzụ a pụrụ iche maka Tyvek na-agwakọta ihe onwunwe nke akwụkwọ. , ihe nkiri na akwa, waterproof, breathable, qualitative ìhè, inogide, dọkatụrụ adọka eguzogide, anwụ ngwa ngwa, elu reflectivity, mgbasa, UV eguzogide, udidi na tactility bụ ihe pụrụ iche, gburugburu ebe obibi nchebe nwere ike recycled, na kasị dakọtara na ụdị nile nke na-ebi akwụkwọ technology na dijitalụ teknụzụ ebi akwụkwọ, dabara adaba maka teknụzụ nhazi dị iche iche.
A na-ejikarị Tyvek eme ihe, dị ka ihe na-adịghị ekpuchi mmiri na iku ume maka mgbidi na mpụga, ihe nkwakọ ngwaahịa maka ọgwụ, yana uwe nchekwa kemịkal na nchekwa nchekwa ụlọ ọrụ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ahụkarị Tyvek n'ọtụtụ ime obodo na ngwaahịa okike. , dị ka ejiji ezinụlọ ngwaahịa, ejiji, art, omenala na ihe na ngwaahịa, gburugburu ebe obibi-echebe na ihe nkwakọ, wdg Tyvek dị ọcha ọcha na nwere abụọ dị iche iche owuwu: a siri ike bughi ihe onwunwe dị ka akwụkwọ na a adụ bughi ihe onwunwe dị ka ákwà.
Ahaziri agba, adụ rụọ
Agba nke Tyvek nwere ike ahaziri ịbụ ihe ọ bụla pantone masịrị gị ma nwee ike ibipụta ya ngwa ngwa. Dị ka ihe dị ezigbo nro, enwere ike ịme ya ngwa ngwa na akpa ọ bụla.
Ihe dị mma nke Tyvek anaghị ejedebe ịgha akpa. Site n'ụzọ, ọbụlagodi akwụkwọ ahụ anaghị egbochi mmiri, oghere nkedo abụghị mmiri.
Nke gara aga: Inogide washable kraft akwụkwọ mkpọchi uwe mmechi Etemeete akpa Natural ịchọ mma Bag
Osote: Eco Ike Ndụ Oge Omuma Okpomoku Washable Akwụkwọ Mgbawa Akwụkwọ ntecha akpa
RPET Ifuru akpa na Full Printing ịchọ mma Pac ...
Ppingzụ ihe ịchọ mma ahaziri ezumike nkwakọ ...
Waffle ụkpụrụ RPET akpa inogide etemeete Natural ...
Cotton akpa nabatara Omenala Clear ppingzụ ahịa Mee ...
Pu ihe n'akpa uwe Sport Style agba ọsọ Bag wais ...